Dilalka qaarijinta ah ee lagu eedeynayo Ruushka oo soo kordhaya - BBC News Somali
Image caption Bebchenko oo kasoo waramaya banaanbaxyadii Kiev 2014-kii
Ra'isulwasaaraha Ukraine Volodymyr Groysman ayaa dowladda Ruushka ku eedeeyay in ay ka dambeyso dilka wariye Ruush ah, balse dowladda ku kacsan oo lagu dilay magaalada Kiev.
Wariyahan oo lagu magacaabo Arkady Babchenko ayaa talaadadii lagu dilay guriga uu degenyahay hortiisa.
Dowladda Ruushka ayaa dhankeeda ku dhawaaqday in loo baahanyahay in baaritaan lagu sameeyo sida uu u dhacay dilka, waxayna sheegtay in dilal badan oo aanan la ogeyn cidda geysatay ay ka dhaceen magaalada Kiev. Iyaga oo farta ku godey xukuumadda Ukraine.
Balse waxaa aad usoo kordhaya dilalka lagu eedeynayo in ay ka dambeyso xukuumadda Ruushka, waxaana ugu dambeeyay dilkii sumeynta ahaa ee loo geystay ninki sirdoonka ahaan jirey Sergei Skripal.
Dalka Britain oo kaliya, waxaa dib u eegis lagu samaynayaa illaa 14 dhacdo oo dad Ruush ah lagu diley siyaabo aanan kala caddeyn, balse lagu tuhunsanyahay Ruushka. Sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha baarlamaanka UK Yvette Cooper bishii maarso markii uu dhacay weerarkii Sergei Skripal.
Rag hubeysan ayaa rasaas la dhacay wariyahan oo warar lid ku ah Ruushka qora had iyo jeer.
Taliyaha booliiska Kiev ayaa sheegay in wariyaha loo diley shaqadiisa awgeed.
Inta aanan la dilin, Babchenko ayaa bartiisa Facebook ku qoray sidii uu uga badbaaday isku day dil qudha afar sano ka hor maalintaas.
Markii uu jaamacada ka qalin jabiyay isaga oo 18 jir ah ayaa lagu daray ciidanka si qasab ah, wuxuuna kasoo dagaalamay Chechnya , kaas oo socday intii u dhaxaysay 1994-tii illaa 2000, wuxuuna ka qoray buug xusuustiisa ah.
Wuxuu buugga kaga sheekeeyay tacadiyada ay geysteen ciidammada Ruushka iyo sidii loo laayay kumanaan kun oo qof.